घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू जोएल माटिप बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम संग प्रसिद्ध छ; “जिमी". हाम्रो जोएल Matip बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइव्यापी तथ्य तपाईं बच्चाहरु को बच्चाहरु को समय देखि तारीख को उल्लेखनीय घटनाहरु लाई पूर्ण लाउछ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्नका साथै समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो प्रभावशाली65 XNUMX ″ उचाईको बारे थाहा छ। यद्यपि केवल थोरैले जोएल माटिपको जीवनीलाई ध्यान दिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र परिवार पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उनको वास्तविक नाम अय्यूब जोएल एन्ड्रय Matip हो। जोएल माटिप को रूप मा त्यो अक्सर भनिन्छ मा जन्म भएको थियो अगस्त १ 8 1991 १ को आठौं दिन उनको आमा, ईवा-मारिया माटिप र बुबा, जीन माटिप बोचम, जर्मनीमा। तल उनको जोएल मटिपका प्यारी आमाबुवाको फोटो छ जुन उनीहरूले २०१ 2014 को समयमा उनीहरूको छोरालाई सहयोग गरे फीफा विश्वकप।
जोएल माटिप आमाबाबु - आमा, ईवा-मारिया र बुबा, जीन माटिप। क्रेडिट वाज.
तिनीहरूको हेराईबाट हेराई गरेर, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि जोएल आधा कास्टको जन्म भएको थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनी क्यामेरोनीनका पिता र एक जर्मन आमाको रूपमा जन्मिएका थिए जुन एशियाई प्रतीक हुन सक्छ।
जोएल माटिप एक नम्र मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। उसको आमा, इवा-मारिया, डिमेंशिया हेरचाहको प्रख्यात विज्ञ हुन्। उनले आफ्नो जीवन स्मृति गुमाउनेहरुका साथ काम गर्न समर्पण गरीन्। जोएल माटिपको आमाले जर्मन रेड क्रसको लागि पनि काम गर्दछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जोएल मटिपका बुबा जीन आफ्नो जन्मभूमि क्यामरूनको फुटबलमा घुम्नु अघि मूलरूपमा रसायन विज्ञानका शिक्षक थिए। उहाँ क्यामेरूनबाट केमिस्ट्री डिग्रीको साथ जर्मनी आउनुभयो। जोएल मटिपका अभिभावक जीन र ईवा-मारिया भेटिएका थिए जब उनका बुवा जीन बोचमको युनिभर्सिटीमा पढ्दै थिए। उनीहरू प्रेममा परे, उनीहरूको सम्बन्ध कायम भयो, विवाह भयो र जोएललाई पनि जन्म दिइयो।
जोएल मटिपले आफ्नी बहिनी रबेकका साथ बसाएकी थिइन् जसले पछि गेलसेनकिचिनमा सफल सफल चिकित्सक बने। उहाँसँग मार्विन माटिप नामक एक ठूलो भाइ पनि छ जो फुटबलर पनि हुन्।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
योएल माटिपका बुवा जीनलाई फुटबलबाट अवकाश लिने समस्या भयो। पूर्व क्यामेरोनियाका फुटबलरले आफ्ना छोराहरू माभिन र जोएल मार्फत उनीहरूको सपना बाँच्नको लागि योजना बनाएका थिए।
पिताको रूपमा पूर्व फुटबलर हुनु, यो गेमको लागि मात्र प्राकृतिक हो योएलमा पढ्न समेत भइरहेको बेला उनले गेम्समैट्सचेले बर्गर फेल्ड स्कूलमा भाग लिइन्। खेलको लागि उनको जुनूनले उनलाई 45 वर्षमा एससी विटिमर एक्सएनमक्ससँग अंशकालिक नामांकन गरेको छ।
उसले सानो जोएललाई क्लबसँग प्रभाव पार्न सुरु गर्न लामो समय लिएन। मुस्कुराएको योएलले चित्रित चित्रको तस्बिर धेरै छिटो सारियो किनकि उनी आफू भन्दा ठूला खेलाडीहरूका बिरूद्ध सफल भएका थिए।
योएल Matip बचपन फोटो। क्रेडिट आईएफसी ग्लोब
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
जोएलको प्रभावशाली प्रदर्शनले उनलाई उनको गृहनगर क्लब, VfL Bochum मा एक स्थान दिए। यो प्रत्येक युवा जर्मन फुटबलरले ठूलो सपना देख्नु सामान्य हो र जोएल म्याटिप पनि यसको अपवाद थिएन। एक शीर्ष जर्मन युवा क्लब मा खेल्ने उनको दृढ संकल्प एक उत्तीर्ण कल्पना जस्तै थिएन।
वर्ष9मा 2000 को उमेर मा, Matip एक सफल परीक्षण पछि Schalke संग दाखिला लिया। को रूप मा परिपक्व परिपक्व जारी राखयो, उनले आफूलाई आफु अकादमी संग जीवन मा राम्रो तरिकाले बस्न को रूप मा देख्यो सेरेन प्रगति उमेर समूह र वरिष्ठ फुटबलमा।
जर्मनीको शीर्ष उडानमा माटिपको पहिलो खेलले उनलाई नोभेम्बर,, २०० Bay मा म्यान अफ द मैच प्रदर्शन बायरन म्यूनिखको बिरुद्धमा देखेको थियो। गोलको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी क्लबसँग खुसी स्टार्टर बन्न पुगे।
Matip 194 उपस्थितिहरु क्लब संग सात सत्रहरु मा गए। म्याटिपले पहिले डर्टमुन्ड प्रबन्धकलाई हराएपछि लिभरपूल अधिग्रहणको ट्रिगर गर्नाले परिभाषित पल आयो जर्गन क्लप्प 2011 / 2012 DFL सुपरकप अन्तिममा।
जोएल मटिप आफ्नो टीमका साथीहरूसँग DFL सुपरकप मनाउँदै। फजलाई क्रेडिट
जब शकल संग उनको अनुबंध 2016 को गर्मी मा समाप्त भयो, जर्गन क्लप्प म्यानपावरहरू थिए जुन उहाँको हस्ताक्षरको लागि लडाई थियो। पुरानो समयको लागि धन्यवाद, जर्मन क्यामेरोनीनले आफ्नो प्रतिद्वंद्वी प्रबन्धक लिभरपूलमा सामेल हुन निर्णय गर्यो।
लिखित समयको रूपमा, लिभरपूल सेन्टर-ब्याक उच्च र शक्तिशाली भएको छ वान डिज्क र Dejan Lovern। बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक महान पुरुषको पछाडि, त्यहाँ सँधै एक महिला हुन्छ, त्यसैले यो भनाइ चलेको हुन्छ। र अफ्रिकी जराबाट प्रायः सबै फुटबलरको पछाडि, लरिसाको व्यक्तित्वमा साँच्चै नै एक ग्लैमरस वैग छ।
जोएल मटिप र उनको प्रेमिका, लरिसा। छविलाई क्रेडिट: इमगुर र डब्ल्यूटीफुट।
लारिसा सम्भवतः सबैभन्दा रहस्यमय वाग हो किनभने कसैको बारेमा कुनै कुरा थाहा छैन कि यो तथ्य माथी छ कि उनी माटिप डेट गर्दै र उसलाई खेल हेर्न मन पराउँछन्।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
जोएल माटिपको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। जोएल एक नाटकीय, रचनात्मक, आत्म-विश्वास, प्रभावशाली र अप्रिय व्यक्तित्व हो। जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफूले चाहेको जुनसुकै कुरा पनि हासिल गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ।
जोएल मटिपका लागि धेरै साथीहरू छन् तिनीहरू तिनीहरूका उदार र वफादारी हुन्। उनको स्वस्थ भावनाको हास्यले अरू मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। एक उदाहरण उनको भिडियो मा प्रकट भएको छ डैनियल स्ट्रिज.
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
तपाईंलाई थाँहा थियो?… त्यहाँ केहि सेराब्रल भएको छ, सर्जिकल पनि, जोएल मटिपको सुरक्षाको बारेमा। सायद त्यो आश्चर्य छ कि दबाइ र फुटबल उनको परिवारको कारोबार हो।
योएल माटिप परिवार क्यामरोनियन जडहरु बाट एक सफल सफल परिवार मध्ये एक हो। परिवार जीन माटपको प्रमुख धन्यवाद, माटिप परिवारले आफ्नो देशमा बोचुममा पहिलो कालो फुटबल कोच उत्पादन गर्न इतिहास बनाएको छ। जेन Matip, पूर्व रसायन विज्ञान शिक्षक (उनको परिवार संग तल चित्रित) खेलाडी बन्नुभयो र पछि B मा FC Italia कोच बन्नुभयो।
जोएल मटिप परिवार फोटो, आफ्नो बुवा (बायाँ), उसको जेठो भाई मार्विन (अर्को बायाँ)। WTFoot मा क्रेडिट।
जोएल मटिपको जेठो भाई, मार्विन मटिप उनीभन्दा years बर्ष जेठो छ। जोएलले जस्तै मार्भिनले क्यामरुनको अदम्य सिंहहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्‍यो। क्लब ए angle्गलबाट, उनले यसलाई बुन्डेस्लिगा २ मा जर्मन क्लब एफसी इol्गोलस्ट्याटको टिम कप्तान बनाए।
अफवाहका अनुसार, म्याटपको आमा पक्षमा परिवारका धेरै सदस्यहरू छन् जसले चिकित्सा अध्ययन गरेका छन्। उदाहरणका लागि, जोएल मटिपका हजुरबुबा र उनका भतिजा-मार्टिन पनि डाक्टरहरू हुन्।
चिकित्सा व्यापार विपरीत, आफ्नो बुबाको पक्षबाट जोएल माटिपको परिवारको गहिरो फुटबल जरा छ। उहाँ जोसेफ-डिजायर जॉब नामको भतिजा भाई हुनुहुन्छ जससँग १ 52 1998 and र २०११ बीचमा Came२ क्यामेरून क्याप्सन थियो।
जोएल माटिप पारिवारिक जीवन- उसको भान्जीको बारेमा।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - LifeStyle
अफ्रिकी मूलका उसका केहि भाइहरू भन्दा फरक, ओबाफेमी मतिन्स, मारियो बालोटेली, एडबेयर, इत्यादि… म्याटिप एक फुटबलर होइनन् जुन एक लाभिस जीवनशैली बाँचिरहेका छन जुन एक मुट्ठी भरिएका राम्रा मनमोहक कारहरू, बोज बाट सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। swagger, केटीहरु आदि। उहाँ आफ्नो औसत मर्सिडीज कारसँग धेरै सहज हुनुहुन्छ।
योएल Matip बचपन कहानी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
रिगबर्ट गीत संग सम्बन्ध:
लिभरपूलमा हस्ताक्षर गर्नको लागि, जोएल मटिपले दोस्रो राष्ट्रिय क्यामेरोनियन बन्ने हो भने उनीहरूको राष्ट्रिय प्रतिमा रेडका लागि खेल्न, रिगाबर्ट गीत.
तिनका मजदूरीहरूको प्रशंसा गर्ने:
जुलाई २०१ In मा, जोएल माटिपले लिभरपूलसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जुन क्रन्च हुँदा, प्रति दिन € १०,2016 (£,, 10,383), प्रति घण्टा € 9,347€433 (£ 389 0.11)) र हरेक सेकेन्ड £ ०.११ कमाउँछ। यो years बर्ष सम्म चलाउनु पर्ने हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं त्यस्तै आर्जन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यस्ता पैसाहरूसँग तपाईं के गर्नुहुन्छ!?…
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जोएल Matip बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।